Muxuu salka ku hayaa muranka ba’an ee shirka shidaalka Soomaaliya? - BBC News Somali
7 Febraayo 2019
Waxaa maanta magaalada London ka furmayaa shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya, balse shirka waxaa ka dhashay hadal heyn badan, su'aalo iyo aragtiyo kala duwan.
Kala aragti duwanaansho
Maalin ka hor shirka waxaa warqad qoraal ah soo saaray guddiga kheyraadka ee Aqalka Sare, taas oo lagu sheegay in shirka London uu sharci darro yahay maadaamaa xeerkii batroolka aanan weli la ansixinin.
Waxa kale oo guddiga Aqalka Sare uu sheegay in qodobka 44-aad ee dastuurka uu dhigayo qeybsiga kheyraadka dalka, halkaasna ay soo galayaan dowlad goboleedyada oo aanan waxbo kala soconin shirkan.
Haseyeeshee wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirishiid Maxamed Axmed oo BBC-da la hadlay ayaa u muuqda in uu ka jawaabay arrintaas "Waa jira heshiis rasmi ah oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay la gashay dowlad goboleedyada sannadkii hore, bishii Juun 5-teedi, kaasi oo lagu saxiixay heshiiska la haanshaha maamulka iyo wadaagga kheyraadka batroolka iyo macdanta Soomaaliya oo ay ku caddahay dhamaan ciddii maamuli laheyd, yaa iskaleh, sidee loo kala qaadanayaa, dowlad goboleedyada maxay qaadanayaan, dowladda dhexe maxay maamuleysaa, dowlad goboleedka aan waxba soo saarin muxuu heli doonaa , intaasi oo dhan iyadoon wali wax xisabaad ah soo bixin ayaa lagu heshiiyay".
Wararka been-abuurka ah ee ku gadaaman shirka Shidaalka Soomaaliya
Dawladda Soomaaliya oo soo dhawaysay in dambi lagu waayay Soma Oil & Gas
Sida ku xusan bogga shirkadda Spectrum ee ay dowladda u xilsaartay baarista xogta shidaalka, shirka waxaa la filayaa in dowladda ay kusoo bandhigto sharciga iyo xeerarka lagu hagayo maalgashiga shidaalka iyo hab-raacyada.
Lama oga kuwa ay yihiin xeerarka iyo hab-raacyada ay Spectrum ka hadlayso mar haddiiba sharcigii shidaalka uusan baarlamaanka federaalka ansixinin.
Balse wasiirka macdanta iyo batroolka ee Soomaaliya Cabdirashiid ayaa BBC-da u sheegay in sahankii la sameeyay uu muujinayo in Sooomaaliya laga helay cadeymo muujinaya shidaal, shirka London na lagu soo bandhigi doono.
Sida ay shirka hadalheyntiisa u badantahay, ka qeybgalkiisa uma badna, xitaa kama qeybgalayaan madaxda ugu saraysa ee dowladda Federaalka, waxaase loo direy wasiirka batroolka iyo madax kale oo mas'uuliyadooda ay tahay waxyaabo kale.
Sida ay sheegtay shirkadda Spectrum, waxaa lasoo bandhigayaa illaa 50 aag-shidaal laga heley xogtooda, kuwaas oo cabir ahaan dhan 173,000 km2.
Hase yeeshee lama oga waxa dhacaya bandhigista kadib, shirkadaha ka qeybgalaya iyo tallaabada xigta ee ay dowladda federaalka qaadi doonto.
Tan iyo intii la shaaciyay shirka London, waxaa xawaare sare ku socday loolanka aragtiyada, kuwaas oo qaarkood ay been abuur yihiin.
Waxaa ka mid ah warqad iscasilaad ah oo baraha bulshada lagu baahiyay, taas oo la sheegay in wasiirkii batroolka uu u gudbiyay Ra'isulwasaaraha isaga oo ka xun shirka.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Betroolka iyo Macdanta Maxamuud Cabadi qaadir Hilaal ayaa BBC u sheegay in warqadaas ay tahay mid been abuur ah.